Wordfence Security Plugin - Semalt Expert Anotaura Nzira Yokudzivirira Nayo WordPress Website yako
Tsamba dzekutsvaga webhutheni dzave ikozvino inogona kutyisidzira nzvimbo dzezvekutengeserana e-commerce, zvichisiya vatengesi vepanhi nevatengesi vasina chavangasarudza kunze kwekuvandudza vhudzi ravo rekuchengetedzwa kwewebsite nguva dzose. Zvisinei, vatengesi vanoshandisa Wordfence nzvimbo havana chikonzero chokuzvidya mwoyo mushure mekuiswa kweShokofence plugin muInternet marketing industry.
Wordfence plugin inopa real-time webusaiti yekudzivirirwa uye inoshamisa inyanzvi yekuongorora. Iyi plugin inosanganisira yakazara firewall uye anti-virus purogiramu iyo inodzivisa kuedza kwehutano husina kunaka, traffic fake, uye hackers kuedza iwe webhusaiti yako. Wordfence plugin inopawo vatengesi nevadzidzisi webhusaiti mukana wokushandisa geo-blocking features, zvirongwa zvakarongwa, uye network authentication.
Mutungamiri anotungamirira we Semalt Digital Services, Julia Vashneva, anoratidza apa mazano anobatsira kuti uite nechinetso kubudirira.
Zvaunoda kuziva pamusoro peShokofence plugin
Wordfence inonyatsodonongodza ruzivo rwepaIndaneti, maitirwo ekugadzirisa, uye zviratidzo-muzvikamu. Iri Plugin WordPress rinouya muzvinyorwa zviviri uye zvisingabhadharwi. Kushandisa premium version ye Wordfence plugin inokupa mukana wokufarira nyika-based blocking, kusununguka kwepachena, uye maonero.
Kuisa nekugadzirisa Plugin yeWefence pane webhusaiti yako ndiro basa rakakosha iwe wati wapedzisa mumushandirapamwe wako. Vafiniti vepaIndaneti vachishandisa purogiramu iyi vanogona kuisa email yavo yekeroti kuti vawane zviziviso nguva dzose pavanosvika pamusika wavo. Zvisinei, nzvimbo dzakagadziriswa nemagadziro ewebhu uye mabhoti dzinogona kukurumidza kuparara nekuda kwenhamba yakawandisa yeemairi inotungamirirwa kunzvimbo.
Kana zvasvika kune kugadzirwa kwehuwandu , zvirongwa zvekugara kwenguva refu zvinosarudzwa kupfuura chinangwa chemazuva mashomanana. Plugin ye Wordfence inopa vaiti webhusaiti panzvimbo yakanaka yekuongorora nekuongorora Mutengesi unobva kubva.Kushure kwekuisa nekugadzirisa Wordfence kuchengetedza plugin pane yako e-commerce websaiti, mutengi anofarira nzvimbo inodzivisa nyika, apo munhu anogona kudzivirira hutanda hweP ad mazita ekubhota webhusaiti.
Kuvhara mabhodhi uye tsvina dzebhubhu uchishandisa Wordfence plugin
Kuvhara mabhodhi uye tsvina dzewebhu zvinogona kuva basa rakanyanyisa sezvo mabhizimisi anoramba achichinja uye achishandura maIndaneti. Kuchengetedza mabhodhi uye tsvina dzewebhu, zviite zvose zviri zviviri nenzira inoshanda uye inobudirira kutarisa pasi pasi sezvavanoshandura umwene.
Bhoti inogona kuva nuisance chaiyo kune e-commerce website. Sezvatareva pakutanga, Plugin Wordfence inosanganisira nzvimbo inodzivisa nyika. Zvinetso zvinouya apo iwe uchiedza kubvisa huwandu hwemakero eP anobva kunyika iwe unoda kuita bhizinesi. Pose paunopinda muakaunti yako, deta inowanzoita kuti iwe webhusaiti yako ye database ishandiswe. Funga kushandisa Wordfence plugin kudzivirira bots uye motokari dzomukati dzinobva pawebsite yako.
Sezvo purojekiti yakagadziridzwa, yakada zvimwe zvarudzo. Munguva ichangopfuura, Wordfence yakagadzira auto-update feature kubatsira vatengesi kushandura uye kudzivisa kusagadzikana kwekurwisa. Maererano nehuwandu hwezvematongerwo enyika, humwe hunoshandiswa neShokofence plugin inotora maawa masere anopfuura makumi maviri kuti apararire munyika yose.
Wordfence inoratidzirwa seimwe yepamusoro pekuchengetedza webhusaiti inochengetedza zvinhu mumutauro wekutengesa. Funga kuisa Plugin Wordfence kuti uone pasi motokari inotangira bot uye mukati memabasa. Usati mabhoti apinda pawebsite yako, vanofanira kudarika CloudFlare. Funga kushandisa kusanganiswa kweShokofence uye CloudFlare kudzivirira bots, malicious codes, uye mukati mechirangaridzo kubva pahupenyu hwe e-commerce website yako Source .